हिटर प्रयोगमा असावधानीले ८ भारतीय पर्यटकको गयो ज्यान, कोठा तताउँदा अपनाउनुहोस् यी सावधानी – Health Post Nepal
हिटर प्रयोगमा असावधानीले ८ भारतीय पर्यटकको गयो ज्यान, कोठा तताउँदा अपनाउनुहोस् यी सावधानी
२०७६ माघ ७ गते १९:०४
विवाहकाे भोलिपल्टै विष सेवन, ६६ दिनपछि प्रेमीको मृत्यु
नेपाल भ्रमणमा आएका ८ भारतीयको हिटर प्रयोगमा विवेक नपुर्याउँदा ज्यान गएको छ । सोमबार राति मकवानपुरको दामनस्थित एभरेस्ट पानोरोमा रिसोर्टको एक कोठामा हिटर बालेर सुतेका उनीहरू मंगलबार बिहान अचेत अवस्थामा भेटिएका थिए । हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौंको ह्याम्स हस्पिटल ल्याइएका आठैजनालाई अस्पतालले मंगलबार मध्याह्न १२ बजे मृत घोषणा गरेको छ । मृत्यु हुनेमा दुई बालक र दुई बालिकासमेत छन् । उनीहरू २ परिवारका सदस्य रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । उनीहरूसँगै घुम्न आएका अन्य ७ भारतीय भने अर्को कोठामा सुतेका कारण सुरक्षित छन् ।
छुट्टीको मौका पारेर भारतको केरलाबाट पोखरा हुँदै दामन घुम्न आएका उनीहरू सोमबार नै पानोरोमा रिसोर्ट पुगेका थिए । बा.३क ३६८८ नम्बरको बसमा आएको १५ जनाको भारतीय टोलीले पानोरोमामा ४ वटा कोठा बुक गरेको थियो । तीमध्ये एउटा कोठामा सुतेका ८ जनालाई बिहानसाढे ९ बजे बेहोस अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
मृत्यु हुने सबै भारत केरलाका हुन् । मृत्यु हुनेमा अन्दाजी ३८ वर्षीय रञ्जित कप, ३४ वर्षीया इन्द्र, ३७ वर्षीय प्रवीण, ३२ वर्षीया सरिया, ५ वर्षीय अभी, ७ वर्षीया अर्चना, ५ वर्षीय वैष्णव र ९ वर्षीया बन्द्राको मृत्यु भएको खुलेको छ ।
गेस्ट बस्ने कोठामा हिटर उपलब्ध छैन, कसरी भयो दुर्घटना ?
पानोरोमा रिसोर्टमा गेस्ट बस्ने कुनै पनि कोठामा हिटरको सुविधा नभएको रिसोर्टले जनाएको छ । रिसोर्टका अनुसार गए राति भारतीय बसेका केठामा पनि हिटर थिएनन् । उनीहरूले लिएका ४ वटामध्ये ८ जना बसेको एउटा कोठाका भारतीयले मध्यराति उठेर रिसोर्टसित हिटर मागेका थिए । कोठामा बालबालिका पनि सुतेको र जाडो अत्यधिक भएका कारण निकै गाह्रो भएको भन्दै उनीहरूले करिब १ बजे रिसोर्टका कर्मचारीलाई उठाएका थिए । कोठामा हिटर दिन नमिल्ने कर्मचारीले बताउँदाबताउँदै उनीहरूले बल गरेर ठूलो हिटर लिएर गएको रिसोर्टको भनाइ छ ।
बिहान रिसोर्टका कर्मचारी चियाका लागि बोलाउन जाँदा केठाबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि कोठा फोरेर हेरेको रिसोर्ट बताउँछ । करिब साढे ९ बजे कोठा खोलेर हेर्दा सबै ८ जना बोहोस र हिटर बलिरहेको अवस्थामा भेटिएपछि रिसोर्टले प्रहरीलाई खबर गरेको थियो । झ्यालढोका पूरै बन्द गरेर हिटर बालेर उनीहरू निदाएका थिए । प्रहरीको आगमनपछि बेहोस अवस्थामा रहेका आठैजनालाई हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइए पनि कसैको पनि ज्यान बच्न सकेन ।
हिटरलगायत कोठा तताउने सामग्री प्रयोगका जोखिम र सावधानी
जाडो मौसममा कोठा तताउनका लागि प्रयोग गरिने सामग्रीका कारण प्रतिवर्ष सयौँले ज्यान गुमाइरहेका छन् । हिटिङ उपकरण वा सामग्रीको प्रयोगमा सावधानी नअपनाउँदा नै यस्ता पीडादायी घटना घट्ने गरेका छन् । त्यसैले यस्ता सामग्रीको पूर्ण विवेक र सावधानीपूर्वक मात्र प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।
कोठा तातो पार्न झ्याल–ढोका बन्द गरेर ग्यास वा इलेक्ट्रिक हिटर, कोइला, ब्रिकेटलगायत सामग्री बालेर सुत्नु आत्महत्या गर्नुसरह हो । यस्ता सामग्री बाल्दा कोठाको अक्सिजन नष्ट हुन्छ र श्वासप्रश्वासमा समस्या हुन्छ । बन्द कोठामा लामो समय यस्ता सामग्री बालेर छोड्दा कोठाको सम्पूर्ण अक्जिसन नष्ट हुने र बाहिरबाट आउन नपाउने हुँदा कोठाभित्रको मानिस सुरुमा बेहोस हुने र पछि थाहै नपाई उसको मृत्यु हुने गर्छ ।
हिटरलगायत बल्ने सामग्री प्रयोग गर्दा उत्पन्न हुने आगोले कोठामा अक्सिजनको खपत बढी हुने र कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा बढ्ने डा. अनुरूप बास्तोला बताउँछन् । ‘लामो समयसम्म बन्द कोठामा आगो बाल्दा तथा तापक्रम बढ्दा अक्सिजन घट्नुका साथै कार्बन मोनोअक्साइडसमेत बन्छ ,’ डा. बास्तोला भन्छन्, ‘यसले रगतमा अक्सिजनको मात्रामा कमी आई मानिस बेहोस हुन्छ र उसको मृत्युसमेत हुन्छ ।’
राम्ररी हावा ओहोरदोहोर नहुने कोठामा दाउरा, गुइँठा, ग्यास, मट्टीतेल आदि कुनै पनि तरिका अपनाएर न्यानोका लागि आगो बाल्दा यस्ता दुर्घटना निम्तिने गर्छन् । यसबाट निस्किने धुवाँमा कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास हुन्छ । यसले अक्सिजनको मात्रा कमी आई मुटुको चालसमेत बन्द भएर मानिसको मृत्यु हुने चिकित्सक बताउँछन् । कार्बन मोनोअक्साइडले मानिसमा टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, रिंगटा लाग्नेजस्ता समस्या हुन्छन् र निस्सासिएर मानिस बेहोस हुन्छ ।
हिटर तथा कोठा तताउन प्रयोग गरिने अन्य सामग्री बालेर कहिले पनि निदाउन नहुने सुझाब डा. बास्तोलाको छ । ‘यस्ता साम्रगी बालेर सुत्दा श्वासप्रश्वासमा बाधा उत्पन्न भएर ज्यानै जान सक्छ,’ डा. बास्तोला भन्छन्, ‘छालाका लागि पनि हिटर राम्रो मानिँदैन । लामो समयसम्म हिटरमा बस्दा छाला सुक्खा हुने हुन्छ ।’
हिटरले हामीलाई चिसोबाट बच्न सहयोग गर्छ । तर, लामो समयसम्म कोठामा हिटर बालेर ताप्दा यसको प्रकाशले हाम्रो आँखालाई असर पुर्याउँछ । यसले आँखाको ज्योति कमजोर बनाउनुका साथै आँखा सुक्खासमेत बनाउने चिकित्सक बताउँछन् । नजिकै बसेर हिटर ताप्नुहुँदैन । सकेसम्म १० सेन्टिमिटर टाटा राखेर हिटर ताप्ने गर्नुपर्छ ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै आगलागीका कारण पाँचजनाको मृत्यु भयो भने ७५ जना घाइते भए । घटनाबाट १ सय ९१ जना प्रभावित बने । यसका कारण १६ करोड ५७ लाख ३८ हजार नौ सय १५ रूपैयाँबराबरको सम्पत्ति नष्ट भएको तथ्यांक छ ।
५. हिटर, कोइला, आगो, गुइँठालगायत कोठा तताउने कुनै पनि सामग्री बालेर ननिदाउनुहोस् । यसले तपाईंको ज्यानै लिने खतरा हुन्छ ।
६. सम्पूर्ण रूपमा बन्द कोठाभित्र कहिल्यै हिटर नबाल्नुहोस् ।
Tags: मृत्यु, हिटर